Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » I-WTM yaseLondon ityhila iSaudi njengeNkulumbuso yeQabane le2021
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
UFahd Hamidaddin, u-CEO weGunya lezoKhenketho laseSaudi (STA).
I-Saudi Arabia inyusa i-drive yayo yehlabathi ukuya kwi-100 yezigidi zeendwendwe ngonyaka nge-2030.
ISaudi yaqala yavula iingcango kunye neentliziyo zayo kubakhenkethi bokuzonwabisa bamanye amazwe ngoSeptemba 2019.
Ubambiswano oluphezulu kunye neWTM yaseLondon luya kuqinisekisa ukuba iSaudi ibekwe njengomdlali ophambili wehlabathi.
Umbono waseSaudi 2030 sisicwangciso sekamva lentlalontle nezoqoqosho zase-Saudi Arabia.
Saudi, ikhaya eliyinyani leArabia libhengezwe njengeNkulumbuso yeQela leWTM eLondon ngo-2021 nanjengoko ilizwe liqhuba ikhwelo lalo lokufikelela kubatyeleli abazizigidi ezili-100 ngonyaka ngowama-2030.
Injongo ekujoliswe kuyo yinxalenye yombono waseSaudi 2030, uyilo lwenkqubela phambili yezoqoqosho nezentlalo eSaudi Arabia, eyilelwe ukwahlula uqoqosho lweli lizwe kunye nokwenza ishishini lezokhenketho eliqhuba kakuhle.
Ubambiswano oluphezulu kunye IWTM yaseLondon Iya kuqinisekisa ukuba iSaudi ibekwe njengomdlali ophambili kwihlabathi kunye nendawo ekhokelayo yabakhenkethi kwindawo yentengiso yamanye amazwe.
UFahd Hamidaddin, iCEO ye IGunya lezoKhenketho laseSaudi (STA), wathi:
“Elona gqiza lethu likhulu labalingane bethu, iiprojekthi, kunye nabameli beendawo abaya kuzo ukuza kuthi ga ngoku, ubukho bethu kwi-WTM yaseLondon yalo nyaka ibalulekile ekumiseni iSaudi njengenye yeendawo zokuzonwabisa ezintsha kubadlali abaphambili kumzi mveliso wehlabathi. Ukhenketho lwaseSaudi lukhethekile, lwahlukile kwaye alukafumaneki kwaye sijonge phambili ekwamkeleni iindwendwe zeWTM eLondon ngobubele esaziwa ngabo. ”
“Sizibophelele ekuqhubekeni nokuseka Saudi uphawu, ukwandisa ubukho bethu bamazwe aphesheya kunye nokwakha ubudlelwane namaqabane athembekileyo aya kuthi abaluleke ekusincedeni siqhube uguquko kwezona ntengiso zethu ziphambili. ”
Abathunywa baseSaudi e IWTM yaseLondon izakukhuthaza kwaye iqhube ulwazi malunga nenkcubeko etyebileyo yendawo ekuyiwa kuyo, ilifa lemveli kunye namathuba okhenketho lokhenketho. Kwibala, iindwendwe ze-WTM zaseLondon kunye neendwendwe ziya kuba nethuba lokuphonononga indawo oya kuyo eSaudi, kuhambo olunentsebenzo oluhamba nomhlaba wentlango kunye neentlambo eziluhlaza, iindawo zakudala zezinto zakudala kunye nemimangaliso yoLwandle Olubomvu.